कति पढेकाले पाउँछन् सर्टिफिकेट धितोमा ऋण ? लिन के गर्नुपर्छ ? - Saptakoshionline
कति पढेकाले पाउँछन् सर्टिफिकेट धितोमा ऋण ? लिन के गर्नुपर्छ ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन ०८, २०७५ समय: ९:५८:३३
काठमाडौं । उद्यमी तथा स्वरोजगार बन्न चाहने तर त्यसको लागि पुँजी जुटाउन नसक्नेहरुका लागि सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने सहज बाटो खुल्ला गरेको छ ।
सरकारले हालै स्वीकृत गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधिमा संसोधन गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले ७ वर्गलाई उद्यमी र स्वरोजगार बनाउन यस्तो कार्यविधि पारित गरेको हो । सरकारले तय गरेको लक्षित वर्गमा ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवाश निर्माण कर्जा, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा र दलित समुदाय ब्यवसाय विकास कर्जा छन् ।
यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परियोजनालाई नै धितो मान्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको घरजग्गा धितो राखेर मात्रै बैंकबाट ऋण लिन पाइने अहिलेको ब्यवस्थामा परिर्वतन हो । परियोजना धितो भनेको तपाइले जुन काम गर्न ऋण लिन खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाइको त्यही परियोजना नै धितो राख्ने भन्ने हो ।
यस्तो कर्जामध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ । अन्य प्रकारका कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी सातै प्रकारका कर्जामा आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत थप गरेर ब्याज लिनेछन् । यो भनेको कुनै बैंकको आधार दर ८ प्रतिशत छ भने त्यसमा २ प्रतिशत थप गरेर १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइने भन्ने हो ।
तपाइले कुनै बैंकबाट यी ७ प्रकारका मध्ये कुनै एउटा कर्जा लिनुभयो र त्यसको आधार दर ८ र त्यसमा २ प्रतिशत थप गर्दा हुने १० प्रतिशत ब्याज पर्यो भने तपाइलाई महिला उद्यमशीलता कर्जामा पाइने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान समायोजन गर्दा तपाइले ४ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिर्दा हुन्छ । अन्य प्रकारको कर्जामा पनि ५ प्रतिशत पर्छ । बैंकको आधार दर बैंकपिच्छे फरक हुन सक्छ । बैंकको आधार दर सबै बैंकले प्रत्येक ३/३ महिनामा प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिनका लागि व्यक्तिको हकमा १८ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्ने छ ।
दश लाख रुपैयाँ भन्दा कमको सामूहिक जमानी कर्जाको हकमा कर्जा जमानी सम्बन्धी कागजात पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
१० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कर्जाको लागि अनिवार्य रुपमा संस्था र १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कर्जाको लागि अनिवार्य रुपमा कम्पनी हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै संस्था वा कम्पनीको हकमा नेपाली नागरिकको शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने छ ।
उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव तर, १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कर्जाको लागि ऋणीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव भएको हुनुपर्ने छ ।
यस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तिर्ण भएको र ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने छ ।
विदेशको विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाको हकमा नेपालको कुनै विश्वविद्यालयबाट समकक्षता सम्बन्धमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचीमा निजले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय समावेश भएको हुनुपर्ने छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद लगायतका सरकारी निकायहरुबाट कम्तिमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रुपमा लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको प्रमाण पेश गरेको हुनुपर्ने छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि उद्यम संचालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तीमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम/पेशा/व्यवसाय/क्षेत्रमा काम गरी स्वदेश फर्केको हुनु पर्ने छ । तर, कुनै पनि देशको स्थायी बसोबासको स्वीकृति प्राप्त (पिआर, ग्रिनकार्ड होल्डर) व्यक्तिलाई यस्तो कर्जा प्रदान गरिने छैन ।
उद्यम संचालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुका साथै विदेशबाट फर्केको ३ वर्ष व्यतित नभएको हुनुपर्ने छ ।
महिला उद्यमशीलता कर्जाका लागि १८ वर्ष पुरा भएको महिला हुनुपर्ने छ । समूहको हकमा फरक परिवारका कम्तीमा ५ जना महिला १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने छ ।
उद्यम संचालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त पंस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ ।
समूहको हकमा सामूहिक जमानी सम्बन्धी कागजात पेश गर्न सक्नुपर्ने छ ।
यस्तै दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाका लागि दलित जातजाती भित्रको १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने छ ।
समूहको हकमा उक्त जातजाति भित्रका फरक परिवारका कम्तीमा ५ जना १८ वर्ष उमेर पूरा भएका मानिसहरुको समूह हुनु पर्नेछ ।
उद्यम संचालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने छ । समूहको हमा सामूहिक जमानी सम्बन्धी कागजातहरु पेश गर्नु पर्ने छ ।
यस्तै उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि माध्यमिक शिक्षा वा सो सरह उत्तिर्ण गरी २५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने छ ।
आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थीले यो कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
स्वदेशको कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्नेवाला भए पनि उक्त कर्जाका लागि निवेदन दिन पाउने छन् ।
यस्तै भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि नेपाल सरकारले निजी आवास अनुदान दिए बाहेक अरु संस्थागत अनुदान नपाएको हुनुपर्ने छ ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरी आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण कार्य शुरु गर्न नसकेको भूकम्प पीडितले पनि यस कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्न योग्य घर नभएका व्यक्तिले पनि उक्त कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले यस कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्दा भूकम्प पीडित, बाढी पीडित तथा विपद् प्रभावित नागरिकहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीयहरुले यस कार्यविधि बमोजिम भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले आवास निर्माण सम्पन्न गर्न तोकिएको अवधि भित्र कर्जा लिई सक्नु पर्ने छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोप विराटनगरमा
प्रदेश १ का लागि ९६ हजार खोप सोमबार विराटनगर आइपुगेको छ । विराटनगरस्थित प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा भण...
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गर्न सक्ने आधार यी हुन,
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क...
संगित साधना प्रतिष्ठानका अध्यक्ष स्वर्गीय राम धामीको स्मृतिमा श्रद्धाञ्जली सभा
इटहरी । इटहरीमा रहेर नेपालकै गित संगित क्षेत्रमा अतुलनिय योगदान गरेका संगित साधना प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष स्वर्गीय रा...
ओलीको पाटीमा लाग्नु नर्क जानु हो ः भटटराई
इटहरी । नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षका युवा नेता योगेश भटटराई देशको जनमत कता छ भनेर माघ ९ गते काठमाडौको कार्यक्रमले देखाएको...
किराँत राई वान्तवा खिमको वार्षिक साधारण सभा तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न
इटहरी । किराँत राई वान्तवा खिमको वार्षिक साधारण सभा तथा प्रसाद राई स्मृति साहित्य पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सुनसरीको इटहर...
इटहरी लेडि जेसिजको १९औं पदहस्तान्तरण तथा पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न
इटहरी । इटहरी लेडि जेसिजले एक औपाचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरि १९औं पदहस्तान्तरण तथा पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न गरेको ...